Ny rindrambaiko finday Android Wear tsara indrindra amin'izao fotoana izao. Androidsis
Ny smartwatches Android Wear tsara indrindra amin'izao fotoana izao
Famantaranandro na smartwatches mbola vokatra tsy dia miparitaka loatra amin'ny mpanjifa izy ireos. Ny iray amin'ireo antony lehibe dia ny kely fampiasana izay mahita azy ireo raha ny tena izy dia miankina amin'ny fifandraisana amin'ny smartphone izay ampifandraisin'izy ireo izy ireo ary mamerina izay ataony. Ny antony lehibe hafa dia izany ny ankamaroan'ny smartwatches dia lafo loatra ho an'ny besinimaroindrindra mandinika izay vao nolazainay.
Saingy na eo aza izany dia toa izany manomboka milamina ny tsenan'ny smartwatch ary mihalehibe mihitsy aza, ary miaraka amin'ny olona maro izay misafidy ny iray amin'ireto fitaovana ireto mba hiditra amin'ny fomba haingana sy haingana amin'ny fampahalalana sasany izay maika indrindra, mamaly na manary hafatra nefa tsy mila esorina ao am-paosiny ny finday avo lenta na, indrindra, mba hifehezana sasany masontsivana ara-pahasalamana sy ara-batana.
1 Ny smartwatches tsara indrindra (na saika) misy amin'ny Android Wear anio
1.3 Moto 360 (taranaka faha-2)
1.3.1 Modely 42mm
1.3.2 Modely 46mm
Ny smartwatches tsara indrindra (na saika) misy amin'ny Android Wear anio
Ny marina dia androany misy karazana smartwatches isan-karazany eny an-tsena, ary na dia misy aza izany amin'ny vidiny roa na telo am-polony euro fotsiny, minoa ahy, ireo famantaranandro marani-tsaina ireo, manam-pahaizana, manana kely kokoa.
Etsy ankilany, ny kinova vaovao an'ny rafitra miasa misaraka Google dia nipoitra, Android Wear 2.0. Natao hangataka izany, ary efa niaritra fanemorana maro aza, saingy toa mendrika izany ny fiandrasana: rafitra miasa miaraka amina magazay fampiharana izay mampihena ny fiankinan-doha amin'ny finday avo lenta. Fa handeha ho any amin'izay alehantsika isika. Ireto ny sasany amin'ireo rindrambaiko finday Android Wear tsara indrindra hita ankehitriny.
Tsy laharana io fa manomboka amin'ny iray amin'ireo filokana farany an'i Google, ny LG Watch Sport, smartwatch izay manana ny endri-javatra rehetra ilainao amin'ny smartwatch: efijery AMOLED lehibe, GPS mifangaro, mpanara-maso ny fo, Fifandraisana LTE, Fanoherana rano IP68, ary fanohanana ny Android Pay.
Ny traikefa fitetezana dia nihatsara noho io bokotra eo amin'ny ilany ankavanana io, izay tsy azo lavina, dia mampatsiahy antsika ny satroboninahitra nomerika an'ny Apple Watch ary ahafahan'ny mpampiasa mamaky ny menus Android Wear.
Tsy mora izy io, 349 dolara, saingy mendrika ny mampiavaka azy ny toetrany:
Efijery 1.38 ″ AMOLED sy vahaolana 480 x 480 miaraka amin'ny 348ppi
Snapdragon Wear 2100 processeur
Refy: 45.4 x 51.21 x 14.2 mm
IP68 voamarina ho fanoherana ny vovoka sy ny rano
Ilay zandrin'ilay iray teo aloha dia tsy manana NFC ho an'ny fandoavam-bola amin'ny finday, ary sady tsy mitondra fifandraisana GPS na LTE na sensor am-po. Azontsika lazaina izany ny LG Watch Style dia "smartwatch hampiasaina" kokoa ho an'ireo izay tsy mila izany betsaka, saingy mbola safidy tsara io, indrindra raha mila fitaovana malina kokoa ianao.
1.2 ″ efijery AMOLED misy vahaolana 360 x 360 sy 299ppi
Refy: 42.3 x 45.7 x 10.79mm
IP67 voamarina ho fanoherana ny vovoka sy ny rano
Moto 360 (taranaka faha-2)
Ny taranaka faha-360 an'ny Moto 2 dia manana bateria lehibe kokoa, Snapdragon 400 processeur ary tonga amin'ny habe roa izy io. Ny ambaratonga avo indrindra amin'ny haingo sy ny fanamorana ny fiovan'ny tadin'ny fiambenana dia roa amin'ny tombony lehibe indrindra.
1.37 ″ IPS LCD efijery misy vahaolana 360 x 325 sy 233ppi
Qualcomm Snapdragon 400 quad-core 1.2GHz quad-core processeur
Refy: 42.0 x 42.0 x 11.4mm
1.56 ″ IPS LCD efijery misy vahaolana 360 x 330 sy 263ppi
Refy: 46.0 x 46.0 x 11.4mm
Ary amin'izany dia namarana ny asany isika. Araka ny hitanao dia safidy fohy izy io, nefa io ihany koa no tsara indrindra amin'ny Android Wear. Eo amin'ny sisiny misy safidy hafa, toy ny Samsung Gear S3 Classic sy Frontier, miaraka amin'ny rafitra fiasa Tizen, na Apple Watch, miaraka amin'ny rafitra fiasan'ny watchOS 3. Fa tantara hafa ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny smartwatches Android Wear tsara indrindra amin'izao fotoana izao